Wararkii Ugu Dambeeyay Saddexdii Qarax Ee Cuslaa Ee Lagu Hoobtay Ee Muqdisho Ka Dhacay, Alshabaab Oo Sheegatay Iyo Raggii Qaraxyada Gaystay Oo Ku Labisnaa Dirayskii U Dambeeyay Ee Ciidanka Xasilinta. | Caroog News
Wararkii Ugu Dambeeyay Saddexdii Qarax Ee Cuslaa Ee Lagu Hoobtay Ee Muqdisho Ka Dhacay, Alshabaab Oo Sheegatay Iyo Raggii Qaraxyada Gaystay Oo Ku Labisnaa Dirayskii U Dambeeyay Ee Ciidanka Xasilinta.
“Muqdisho Oo Shalay Meydadka Baroortu Isqoorsatay, Alshabaab Oo Mar Kale Muujisay Cududa Ay Ku Leedahay Xamar Dhexdeeda Iyo Farmaajo Oo Safar Dalxiisa Ah Ku Jooga Goobaha Qadiimiga Ah Ee Dalka Itoobiya.
“Su’aalaha ugu badan ee Reer Muqdisho jawaabta u waayeen ayaa waxa ka mid ah Kooxaha qaraxyada fuliya oo lagu arko hadba Dirayska ugu dambeeya ee loo keeno Ciidanka Amaanka.
Muqdisho(Caroog.net) – Saddex Qarax oo waa wayn ayaa Shalay Mar kale gilgilay Magaalada Muqdisho ee Caasimada Dalka Soomaaliya waxaana ka dhashay dhimasho baaxad leh iyo dhaawac aad ubadan, waxaanay arintaasi ku soo beegmaysaa wakhti uu Madaxweynihii dalkaasi Maxamed Cabdilaahi Farmaajo safaro dalxiis ku marayo Goobaha Qadiimiga ah ee Dalka Itoobiya.
Wararkii ugu dambeeyay ee Wargeyska Foore xalay ka helay Qaraxyadaasi oo Shalay oo jimce ahayd ka dhacay gudaha Magaalada Muqdisho gaar ahaan goobo dhowr tallaabo u jira isgoyska KM 4 ee gobolka Banaadir ee Gudaha Magaalada Muqdhisho ayaa daaha ka rogay weerarkii in Qaraxyadda oo tiradoodu ay gaadheysay saddex ay ka dhaceen nawaaxiga Hoteelka Saxafi oo kamid ah hotellada ugu caansan ee caasimadda Muqdisho ku yaalla, waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Labo kamid ah qaraxyada ayaa ka dhacay wadada hormarta Hoteelka iyo Xarunta dambi baadhista ciidanka Booliska Soomaaliya ee loo soo gaabiyo CID-da, gaar ahaan dhinaca wadada laamiga ah ee u dhaxaysa Isgoysyada KM4 iyo Zoobe oo hore qarax lagu hoobta ka dhacay.
Dad ku sugnaa goobta ayaa Warbaahinta u sheegay in Qaraxa labaad uu ka dhacay afaafka hore illinka laga galo Hoteel Saxafi, gaar ahaan albaabka ku yaalla wadada tagta garoonka diyaaradaha ee Muqdisho, halkaasi oo ay Hoteelo kale ku yaallaan. Illo wareedyo dhinaca caafimaadka iyo Booliska ah ayaa xaqiijiyay in 30 ruux oo shacab u badan ay ku geeriyootay inta xalay la xaqiijiyay, halka dhaawaca uu intaas ka badan yahay. Warar kale ayaa sheegaya in dhaawaca uu kor u dhaafayo 20 qof oo shacab u badan. Ciidamada amaanka, gaar ahaan ilaalada Hotel Saxafi iyo CID-da ayaa toogasho ku diley rag hubeysan oo gaadhaya illaa afar, kuwaasoo isku dayayay inay gudaha u galaan Hotelka kaddib qaraxyadii markii ay dhaceen, kuwaasi oo doonayay inayd Gumaad halkaasi ka gaystaan oo ay gudaha huteelka ku dilaan Masuuliyiinta Xukuumadda ka tirsan oo Huteelkaasi ku sugnaa.
Xarakada Al-Shabaab ee sida weyn uga soo horjeedda jiritaanka dowladda federaalka iyo joogitaanka ciidanka AMISOM iyo kuwa kale ee Ajaanibta ah ayaa durbadiiba dhabarka saaratay mas’uuliyadda weeraradaani oo labo kamid ah ay ahaayeen Ismiidaamin, sida ay sheegeen Hay’addaha ammaanka qaabilsan. Shalay oo Khamiis ahayd ayaa markii Qaraxu ka dhashay Miino lagu soo rakibay gaadhi oo ka dhacay degmada Xamar-wayne ee gobolka Banaadir lagu dilay Xilldhibaan ka tirsan Baarlamaanka HirShabeelle.
Qaraxyada ka dhaca Magaalada Muqdisho ayaa dhibaatada ugu badan waxay kasoo gaadhaa dadka shacabka ah ee ku sugan goobaha la weeraro. Su’aalo badan ayaa ka dhasha qaraxyada ka dhaca magaalada Muqdisho, kuwaasi oo qaarkood aanan Jawaabo loo helin, waxaana ugu horeeya labiska ay wataan kooxaha weerarka geysanaya oo ah midka ugu dambeeya ee ay isticmaalaan ciidamada dowladdu. Kooxdii maanta weerarka fulisay waxay wateen dharka ciidamada xasilinta magaalada Muqdisho ee dhowaan la baabi’iyey. Dharkaas ayaa waxaa ciidamada u keenay tababareyaashooda caddaanka ah ee ka yimid dalalka reer galbeedka.
Yaa Siiya Labiska ay adeegsadaan kooxaha fulinaya weerarka, waa Su’aasha ugu badan ee ay isweydiinayaan Shacabka Soomaaliyeed, maadaama Al-Shabaab aysan awood buuxda ku laheyn gudaha magaalada Muqdisho. Dadka Falanqeeya amaanka ayaa sheegaya inay jiraan xubno Al-Shabaab u fududeeya inay helaan labista ugu dambeeya ee ciidamada xooga dalka iyo hubka oo inta badan ay ka helaan xeryaha ciidamada ee ay weeraraan.
Su’aalaha kale ee ka dhasha Qaraxyada ayaa ah sidee loo heli waayay xogta ay helaan Al-Shabaab mid ka badan, Tusaale waxaa Shabaab ay qorsheeyaan goobta ay weerarayaan iyaga oo eeganaya xiliyada shaqsiyaadka ay doonayaan ka baxayaan goobta ay damacsan yihiin ama ay dabacsan tahay amaanka goobta ay weerarayaan.
Qaraxyadani ayaa sidoo kale ku soo beegmaya iyadoo Shalay uun uu dalka ka dhoofay Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo booqasho ku jooga iminka dalka Itoobiya kaasi oo safaro dalxiis ah ku gaalaa bixinaya Goobaha Dalxiisa ee qadiimiga ah ee Dalkaasi Itoobiya .